कांग्रेस सांसद रायमाझीको प्रश्नः सिंहदरबारको आवश्यकता परेन भने ताला लगाउने हो कि ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कांग्रेस सांसद रायमाझीको प्रश्नः सिंहदरबारको आवश्यकता परेन भने ताला लगाउने हो कि ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ५ माघ आईतवार १४:५४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने काम बालुवाटारबाट गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद रायमाझीले निवासबाटै काम गर्ने भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तला लगाइदिए हुने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निवास हो बालुवाटार । सिंहदरबारको आवश्यकता परेन भने सिंहदरबारमा ताला लगाउने हो कि ? प्रधानमन्त्री सुत्ने ठाउँमा मिटिङ गर्ने, भेटघाट गर्ने ? अब प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राख्ने हो ?’
उनले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित आएका विधेयकहरुलाई राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गर्नुपर्नेसमेत बताए । उनले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा कानुन विपरित यति होल्डिङ्स प्रालिलाई दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले लिज वापत यति होल्डिङ्स प्रालिले दिए भन्दा ५० करोड रुपैयाँ बढी आफूले तिर्ने भन्दै भाडामा आफूलाई दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केही गिरोहको घेराभित्र मात्रै रमाउने गरेको र उनीहरुकै रिपोटिङका आधारमा मुलुकको विश्लेषण गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत फोन ट्याब गर्न समेत पाउने गरि ल्याईएको विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेर मोबाईल बन्द गर्दा बेठिक र आज जनताको फोन ट्याप गर्न पाउने विधेयक ल्याएर नया महाराजा बन्न खोज्ने कसरी ठिक हुन सक्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ?भन्दै प्रश्न गरे ।
विवाहपञ्चमी महोत्सवमा धनुषयज्ञ(फोटोफिचर)
जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा आज रामजानकी विवाहपञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन धनुषयज्ञ मनाइँदै छ ।